Vimeo wuxuu kasbaday Suuqa Suuqa Fiidiyowga: Taraafikada 269% | Martech Zone
Dhawaan, wax badan oo cilmi -baaris ah ayaan ku sameynayay fiidiyowga macaamiishayda. Fiidiyowgu wuxuu noqonayaa arrin aad u weyn waayo -aragnimada internetka; dhab ahaantii, waxaa jira fursad wanaagsan oo goobtaada ay gabi ahaanba ka boodi doonto boqolkiiba wanaagsan ee booqdayaasha haddii waxaad bixisaa fiidiyoow. Telefoonada casriga ah ee casriga ah ayaa sidoo kale lagu hagaajiyay fiidiyowga oo daawadayaashu way qaylinayaan.
Youtube horeyba waa mishiinka labaad ee ugu weyn raadinta internetka. Laakiin barnaamijyada kale ee fiidiyowga ayaa si fiican u shaqeynaya, iyada oo kororka laba-godka ah ee taraafikada sanadba sanadka ka dambeeya. Ilaa hadda, in kastoo, vimeo ayaa ku talaabsatay horumaro aad u badan… kana badisay labadii tartan ee ugu waaweynaa - metacafe iyo Dailymotion. Waa kuwan tirakoobyadii ugu dambeeyay Iska badal:
Fiidiyowgu sidoo kale wuxuu noqonayaa cunsur leh matoorada raadinta. Google wuxuu badanaa ku rusheeyaa natiijooyinka fiidiyowga ee ugu dambeeyay, oo ay la socdaan sawirro, bogga natiijooyinka mashiinka raadinta. Barxadaha ayaa noqonaya kuwo jilicsan flexible Tijaabooyinkii ugu dambeeyay ee Youtube loo oggol yahay bogagga degitaanka iyo isdhexgalka isticmaalaha!
Marka laga reebo awoodaha SEO, fiidiyowgu waa mid aad u fiican in loo gudbiyo laba sababood oo suuqgeyn ah:
Awoodda fiidiyaha si fudud loogu sharxi karo geedi socodyada aadka u adag ama isdhexgalka. Maxaad iskugu daydaa inaad ku sharaxdo sawirrada iyo qoraalka marka aad samayn karto 30 fiidyow oo labaad oo sameeya aragti aan iin lahayn.
Awoodda fiidiyaha ee ku xirnaanta shaqsi ahaan iyo si wax ku ool leh dhagaystayaasha. Haddii sawirku qiimihiisu yahay kun eray, fiidyowgu waa malaayiin.
Waxaan hubaa in qiimaha hoose ee Vimeo, tayada sare iyo qurbaannada adag ay dardar gelinayaan kobcintiisa. Martigelinta ganacsigu waa $ 59 sanadkiiba 5Gb oo upload ah ayaa usbuucii la ogol yahay. Boggu wuxuu u oggolaanayaa dib u soo celin qeexitaan sare oo weyn Analytics iyo bogagga kanaalka ee sida wanaagsan loo qaabeeyey. Waxaan dhawaan dhigay a Highbridge Channel Channel taasi waa fiiqan tahay. Waxay sidoo kale u oggolaadaan xiriiriyeyaasha dhammaadka fiidiyowyadaada iyo ka saarista astaantooda markii ay ku dhex jiraan.
Goliath -ku wuxuu sii ahaanayaa Youtube… sidaa darteed haddii aad si adag iskugu deyeyso inaad gaarto dad badan, waxaad u baahan tahay inaad ku ciyaarto garoonkooda dambe. Weli ha tirin kuwa kale ciyaarta, in kastoo! Waxaa jira fursado badan.
Tags: Accenturesharaxaadda blogGaliyeriix halkan si aad u dalbatotirakoobka dadka ee facebookSitesocialitelaptop-ka fiidiyowga ahmuuqaalka